जापानमा बनाइएका जापान काण्डहरु हेर्नुस्, नेपालमा हलचल मच्चाएको जापानमा खिचिएको शारिरिक काण्ड ! - Charchit Entertainment!
Home ijob जापानमा बनाइएका जापान काण्डहरु हेर्नुस्, नेपालमा हलचल मच्चाएको जापानमा खिचिएको शारिरिक काण्ड !
जापानमा बनाइएका जापान काण्डहरु हेर्नुस्, नेपालमा हलचल मच्चाएको जापानमा खिचिएको शारिरिक काण्ड !
युवतीलाई उनको साथीले एप्पल आइडी बनाइदिएको र सोबारे ती साथी जानकार भएकाले साथीबाट यो लिक भएको दाबी पनि बजारमा आएका छन् ।
जानकारका अनुसार एप्पल आइडीबारे जानकारी भएको अवस्थामा र सो क्लाउड कनेक्ट भएको अवस्थामा आफ्नो मोबाइलमा भएका तस्बिर र भिडियो अन्य व्यक्तिले हेर्न सक्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको यो पहिलो काण्ड भने हैन । थरिथरिका काण्ड विभिन्न समयमा आइरहन्छन् । शारिरिक काण्डको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
जापान काण्ड सेलाउन नपाउँदै सामाजिक सञ्जालमा बस काण्ड आयो । बसमा सवार एक यात्रुले ह*स्तमै*थुन गरिरहेको दृश्य थियो त्यसमा ।
लगत्तै तोरीबारी काण्डको नाममा अर्को हट क्लिप सार्वजनिक भयो । यसअघि पनि बेस्टुकाण्ड, एयरफोन काण्ड, फिटकिरी काण्ड लगायतका नाममा तालतालका सेक्स काण्ड आए सामाजिक सञ्जालमा ।
१७ वर्षीय एक किशोरीले आफ्नो सम्बन्धबारे फेसबुकमा रहेको एक पेजमा गरेको कमेन्ट बेस्टु काण्डको रुपमा फैलियो गत वर्ष । नेप्लिज टिन एजर कन्फेसन नामक फेसबुक पेजमा ती किशोरीले आफ्नो प्रेमी नभएको, फेसबुकमा च्याट गर्ने क्रममा साथी बनेको व्यक्ति प्रेमी बनेको र उसलाई घरमा कोही नभएको बेलामा बोलाएर शारिरिक सम्बन्ध राखेको लेखेकी थिइन् । प्रेमीपछि केही दिनमा आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड घरमा आउँदा ऊसँग पनि शारीक सम्बन्ध बनेको र प्रेमीभन्दा साथीसँगको सम्बन्धमा बढी मजा आएको लेखिन् । बेस्ट फ्रेन्डसँग मजा आएको शब्दलाई लिएर यसलाई ‘बेस्टु काण्ड’ भन्दै प्रचार गरियो ।
यो पनि एउटी युवतीले आफ्नो शारीक सम्बन्धबारे फेसबुकको एउटा पेजमा लेखेको सन्देश हो । सन्देशमा उनले लेखेकी थिइन्, ‘म धेरै पहिलादेखि रिलेसनमा थिएँ । ५० पटक भन्दा बढी समय शारिक सम्बन्ध भयो । होटलमा रुम लिन पैसा नहुने भएकाले प्रेमीसँग जंगलमा जाने गर्थें तर प्रेमीसँग सम्बन्ध राख्दा धेरै सन्तुष्टि हुन छाड्यो । एक पटक ट्राइ गरौँ न भनेर प्रेमी र मेरो एयरफोन प्रेमीको लिं*गमा बाँधेर शारीृरीक सम्बन्ध राख्दा मजा आयो ।’
गत वर्ष अर्को शारीरिक काण्ड चर्चामा आयो, फिटकिरी काण्डको रुपमा । यो पनि एक युवतीले फेसबुकको वुमन वारियर नेपाल नामको पेजमा आफ्नो शारीरिक अनुभवबारे लेखेको सामग्री हो । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘मैले विवाह गर्न लागे पनि तनाव भयो । म भर्जिन थिइनँ । श्रीमान्ले म भर्जिन नभएको थाहा पाउलान् भन्ने डर थियो । कसैले यौ**नाङ्गमा फिटकिरी दल्दा भर्जिन जस्तै हुने सुझाव दिएपछि त्यहीअनुसार गरेँ । पहिलो सुहागरातमा मेरो रगत पनि आयो । श्रीमान्ले चाल पनि पाएनन् ।